MW CMC Oo U Hambalyaynaya Dhamaan Muslimiinta Iyo Sanadka Cusub Ee 2009TI - Cakaara News
MW CMC Oo U Hambalyaynaya Dhamaan Muslimiinta Iyo Sanadka Cusub Ee 2009TI
Jigjiga(Cakaaranews) Axad, 11ka September 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa dhamaan muslimiinta caalamka ee nabada jecel gaar ahaan muslimiinta reer itoobiya khaasatan shacabwaynaha deegaanka ugu hambalyeeyay farxada ciida barakaysan ee ciidul-adxa isagoo ilaahay uga baryay inuu sanadkan sanadkiisa kugaadhsiiyo nabadgelyo, barwaaqo, farxad iyo rayn-rayn.
Wuxuuna madaxwaynuhu kubooriyay dadka wax haysta inay caawiyaan walaalahooda aan waxba haysanin islamarkaana ay udhuun duleelaan gaar ahaan walaalahooda tabaalaysan ee aan baahidooda sheegan Karin.
Sidoo kale, madaxwayne CMC ayaa hambalyo diiran oo farxada sanadka cusub ee 2009TI udiray dhamaan shacabwaynaha dalka itoobiya meel kasta oo ay caalamka kajoogaan gaar ahaan kuwa samaha iyo nabada dalka jecel khaasatan shacabwaynaha DDSI. Wuxuuna ilaahay uga rajaynayaa inuu siiyo khayrka iyo barwaaqada sanadka cusub islamarkaana uu nabad iyo horumar kugaadhsiiyo sanadka xiga.
Dhanka kale, madaxwaynaha ayaa xusay in carqaladaha ay wadaan onag iyo ginboot7 ay ujeedadeedu tahay sidii ay ubadali lahaayeen nidaamka federalismka ah ee kudhisan dimoqraadiyada, sinaanta iyo cadaalada ee uu mideeyay dastuur kali ah islamarkaana raba inay kubadalaan nidaamkii cadaadiska iyo dhiigmiiradka kudhisnaa ee kiniisadaha looga talin jiray. Kaas oo uu gabalkiisu waa hore dhacay. Wuxuuna madaxwaynuhu carabka kudhuftay in itoobiya ay itoobiya kusii ahaan karto oo kali ah jiritaanka nidaamka federalismka ah iyo dastuurka. Madaxwaynaha ayaana uga digay cid alaale iyo cidii iskudayda inay meel uga dhacdo sharafta iyo sumcada wadanka ama rabta inay soo celiso nidaamyadii cadaadiska iyo shuuciga ahaa inaan laga ogolaanaynin habayaraatee oo aan kaxigno dhimasho. Wuxuuna fariinta udiray qurbajoogta udhalatay deegaanka ee dunida dacaladeeda kunool iyo qaranjoogtaba inay af ama qoraal kuladagaalamaan dadka kaxun nidaamka federalismka ah ee caadada kadhigtay qorida propagandada aan sal iyo raad toona lahayn.